သားသားမီးမီး တို့ ကိုစစ်ကျွန်ပညာရေး မသင်စေချင်တဲ့ မေမေတို့အတွက် အကြုံပြုလာတဲ့ မေမေ Treza – MC Tv Club
သားသားမီးမီး တို့ ကိုစစ်ကျွန်ပညာရေး မသင်စေချင်တဲ့ မေမေတို့အတွက် အကြုံပြုလာတဲ့ မေမေ Treza
ပရိသက်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကတော့ တော် လှန်ရေးအတွက် ပါဝင်ကြိုးစားပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲ ပညာ ရေးနဲ့ပါတ် သက်ပြီး ချစ်သုဝေက ယခုလိုပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်ပညာတတ်မြောက်ဖို့ကလည်းအရေးပါပြီး စစ်ကျွန်ပညာရေးအောက်လူညွန့်မတုံးချင်တဲ့ မိဘတွေမှာ အပူမီးဝိုင်းရတယ် Trezaလည်းမိဘဖြစ်လို့ လက် လှမ်းမီရာနားလည်သလောက်လေး ဝေမျှပါရစေ။
CBE ပြည်သူ့ပညာရေး online ကကျောင်း – နေရာ internetလိုင်းရသည့်မည်သည့်နေရာကမဆိုတက်ရောက်နိုငဖွင့်ထားပြီးအရေအတွက် 44 ကျောင်း(NUG MOE မူအရ စိစစ်ပြီးကျောင်းရှိသလို စိစစ်ဆဲကျောင်းများလည်းရှိ)commentမှာ ပြည်နယ်တိုင်းအလိုက် linkတွေရေးပေးထားပါတယ် အိမ်မှာ ကိုယ်ဘာသာသင်( internetလိုင်းအဆင်မပြေ၍ or online ကျောင်း ဝင်ခွင့်မရလိုက်သူတွေ)
လိုအပ်ချက် – 1.ကလေးကို သင်ပေးမယ့် နီးစပ်ရာ ဆ ရာ ဆရာမ မိဘ ၏ လွန်စွာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှူ(ရေးရတာတောင်အတော်စိတ်ရှုပ်ပါတယ် လောလောဆယ် ကိုယ်တိုင်ကဒီဘဝမို့ပါ ကလေးငယ်သေးတာရယ် နေစရာအတည်တကျဖြစ်မနေတာရယ်မို့ ကိုယ့်ဘာသာလေ့လာသင်နေရတာမို့ but you all can do it)
2. NUG MOE က စီစဉ်ပေးတဲ့ သင်ကြားနည်းတွေရော အတန်းစုံသင်ရိုးတွေရောကို MBEmyanmar basic education handbook download linkတွေpageမှာရှိပါတယ်။MBEHapplication(andriodပဲရသေး),ပုံတွေမှာပြထားတယ်နော်။ မြေပြင် ပြည်သူ့ပညာရေးကကျောင်း နေရာ စိုးမိုး, လွတ်မြောက်နယ်မြေ လို အပ်ချက်- funding, သင်ခန်းစာအစုံပါOTG (လကုန် macrame projectလေးနဲ့fundingရှာဖို့ကြိုးစားနေ)
Ok.အခု အရေးကြီးတာလာပါပြီ။အတန်းတက်ဖို့ – တလရအောင် အလွန်ကာလ မှာ အသက်နဲ့ညီတဲ့အတန်းတက်ခွင့်ရမှာပါ ဒါပေမယ့် စာမေးပွဲဖြေရမယ်။ အ ရည်အချင်းမမှီရင်ရောအသက်အရအတန်းပေးတက်မှာပါပဲ (အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကို အထူးဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့စာမေးပွဲစစ်တာပါ) အဆင်ပြေကြပါစေ မေမေ ဖေဖေတို့ရေ။ မေမေ ထရီဇာ
သားသားမီးမီး တို႔ ကိုစစ္ကြၽန္ပညာေရး မသင္ေစခ်င္တဲ့ ေမေမတို႔အတြက္ အႀကဳံျပဳလာတဲ့ ေမေမ Treza
ပရိသက္ႀကီးေရသ႐ုပ္ေဆာင္ခ်စ္သုေဝကေတာ့ ေတာ္ လွန္ေရးအတြက္ ပါဝင္ႀကိဳးစားေပးေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္လဲ ပညာ ေရးနဲ႕ပါတ္ သက္ၿပီး ခ်စ္သုေဝက ယခုလိုပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္ပညာတတ္ေျမာက္ဖို႔ကလည္းအေရးပါၿပီး စစ္ကြၽန္ပညာေရးေအာက္လူၫြန႔္မတုံးခ်င္တဲ့ မိဘေတြမွာ အပူမီးဝိုင္းရတယ္ Trezaလည္းမိဘျဖစ္လို႔ လက္ လွမ္းမီရာနားလည္သေလာက္ေလး ေဝမွ်ပါရေစ။
CBE ျပည္သူ႕ပညာေရး online ကေက်ာင္း – ေနရာ internetလိုင္းရသည့္မည္သည့္ေနရာကမဆိုတက္ေရာက္နိုငဖြင့္ထားၿပီးအေရအတြက္ 44 ေက်ာင္း(NUG MOE မူအရ စိစစ္ၿပီးေက်ာင္းရွိသလို စိစစ္ဆဲေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိ)commentမွာ ျပည္နယ္တိုင္းအလိုက္ linkေတြေရးေပးထားပါတယ္ အိမ္မွာ ကိုယ္ဘာသာသင္( internetလိုင္းအဆင္မေျပ၍ or online ေက်ာင္း ဝင္ခြင့္မရလိုက္သူေတြ)
လိုအပ္ခ်က္ – 1.ကေလးကို သင္ေပးမယ့္ နီးစပ္ရာ ဆ ရာ ဆရာမ မိဘ ၏ လြန္စြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႉ(ေရးရတာေတာင္အေတာ္စိတ္ရႈပ္ပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ ကိုယ္တိုင္ကဒီဘဝမို႔ပါ ကေလးငယ္ေသးတာရယ္ ေနစရာအတည္တက်ျဖစ္မေနတာရယ္မို႔ ကိုယ့္ဘာသာေလ့လာသင္ေနရတာမို႔ but you all can do it)
2. NUG MOE က စီစဥ္ေပးတဲ့ သင္ၾကားနည္းေတြေရာ အတန္းစုံသင္ရိုးေတြေရာကို MBEmyanmar basic education handbook download linkေတြpageမွာရွိပါတယ္။MBEHapplication(andriodပဲရေသး),ပုံေတြမွာျပထားတယ္ေနာ္။ ေျမျပင္ ျပည္သူ႕ပညာေရးကေက်ာင္း ေနရာ စိုးမိုး, လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ လို အပ္ခ်က္- funding, သင္ခန္းစာအစုံပါOTG (လကုန္ macrame projectေလးနဲ႕fundingရွာဖို႔ႀကိဳးစားေန)
Ok.အခု အေရးႀကီးတာလာပါၿပီ။အတန္းတက္ဖို႔ – တလရေအာင္ အလြန္ကာလ မွာ အသက္နဲ႕ညီတဲ့အတန္းတက္ခြင့္ရမွာပါ ဒါေပမယ့္ စာေမးပြဲေျဖရမယ္။ အ ရည္အခ်င္းမမွီရင္ေရာအသက္အရအတန္းေပးတက္မွာပါပဲ (အရည္အခ်င္းျပည့္မွီဖို႔အတြက္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အထူးျဖည့္စြက္သင္ၾကားေပးနိုင္ဖို႔စာေမးပြဲစစ္တာပါ) အဆင္ေျပၾကပါေစ ေမေမ ေဖေဖတို႔ေရ။ ေမေမ ထရီဇာ
Previous Article နည်းနည်း ဂုဏ်စာချင်လို့ပါဆိုပြီး ပြောလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်
Next Article ချစ်သူလေးရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ရေစုန်မှာမျောရတော့မဲ့အဖြစ် ရောက်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်